Senegal, oo ah waddan cusub oo ku guulaystey, geesiyaal iyo aragti Afrikaan ah oo dalxiis ah
Location: Bogga ugu weyn » Soo dirida » Dalka | Gobolka » Senegal » Senegal, oo ah waddan cusub oo ku guulaystey, geesiyaal iyo aragti Afrikaan ah oo dalxiis ah
Senegal, si rasmi ah Jamhuuriyadda Senegal, waa waddan ku yaal Galbeedka Afrika. Senegal waxa ay xad la wadaagtaa Mauritania oo woqooyi ah, Mali bari ka xigta, Guinea koonfur-bari, iyo Guinea-Bissau oo ka xigta koonfur-galbeed.
enegal waxa lagu yaqaanaa in uu yahay wadan nabdoon oo leh dad deegaanka ah oo saaxiibtinimo leh. Dhaca iyo dembiyada rabshadaha wata ee ka dhanka ah dalxiisayaasha waa wax aan caadi ahayn.
Meesha ugu galbeed ee Afrika si la yaab leh uma garanayaan dadka ku hadla luqadda Ingiriiska. Si kastaba ha ahaatee, Senegal waa waddan ay ku jiraan caadooyinka qani ah iyo quruxda dabiiciga ah oo isku dhafan si saameyn weyn leh. Socotada Faransiisku waxay ku raaxaysanayeen xeebaha bacaadka leh ee Senegal iyo muuqaalada muuqaalka leh tan iyo 1970-meeyadii.
Dakar waxay hoyga u tahay hab-dhaqanka iyo hab-dhaqanka, Senegal ee duugga ah iyo kuwa cusub. Waa magaalo soo jiidasho leh qoob ka ciyaarka, ugaarsiga gorgortanka, iyo dhaqanka dhabta ah. Xaafada nasashada ee Mamelles, La Calebasse waa meel fiican oo lagu muunadeeyo cunnooyinka dhaqameed ee Afrikaanka ah ee saqaf daboolan oo qurxoon.
Hogaamiyayaasha socdaalka iyo warshadaha dalxiiska ee dalkan galbeedka Afrika ayaa aad u faraxsan oo fahmay sawirka weyn ee Dalxiiska Afrika. Usbuucii la soo dhaafay, daaqadda fursad gaar ah oo Senegal ay ku qaadan karto hoggaanka Afrika ee ka qayb qaadashada warshadaha ugu weyn adduunka, safarka, iyo dalxiiska ayaa noqday mid aad u dhow.
Mr. Deme Mouhamed Faouzou, la taliyaha sare ee wasiirka dalxiiska, safiir u ah guddiga dalxiiska Afrika, xubin ka ah Shabakadda Dalxiiska Adduunka, laguna abaalmariyay halyeyga kaliya ee Dalxiiska u magacaabay Galbeedka Afrika ayaa sidaas fahamsan.
Macky Saall, Madaxweynaha Senegal
Maanta oo Sabti ah ayaa Madaxda Maamul Goboleedyada dalka ka jira Midowga Afrika (AU) la doortay HE Macky Sall, Madaxweynaha Jamhuuriyadda Senegal, oo ah Guddoomiyaha cusub ee ururkan muhiimka ah ee midnimada Afrika.
Khudbadiisii ​​aqbalaada, Madaxweyne Macky Sall waxa uu sheegay inuu bogaadinayo sharafta ay ku lammaan tahay masuuliyadda iyo kalsoonida la geliyay shakhsiyadiisa, iyo xubnaha Xafiiska cusub, si ay u hoggaamiyaan masiirka Ururka sanadka soo socda. "Waan idiin mahadcelinayaa waxaana idiin xaqiijinayaa sida ay nooga go'an tahay in aan si wadajir ah ula shaqeyno dhammaan dalalka xubnaha ka ah fulinta waajibaadkeena" ayuu yiri Guddoomiyaha cusub ee Ururka. “Waxaan bogaadinayaa aabayaashii aasaasay Ururka. Lixdan sano ka dib, aragtidooda iftiimaya waxay sii waddaa dhiirigelinta wada noolaanshahayaga iyo inay iftiimiso socodkeena midaysan ee ku wajahan fikradda is-dhexgalka Afrika" ayuu raaciyay.
Is dhexgalka Afrika waa waxa gaadiidka iyo socdaalka iyo dalxiiska uga baahan Afrika. Dr. Walter Mzembi, oo ah Guddoomiyaha Isku-xidhka Dalxiiska Adduunka ee Qaybta Afrika ayaa shalay uun ka sheegay khudbadiisa Golaha Ganacsiga Afrika ee Qaramada Midoobay: "Sida cad, Dalxiiska, sida qaybaha kale ee dhaqaalaha sida Ganacsiga iyo Ganacsiga, Beeraha iyo Macdanta, waxay muhiim u tahay ilaa xadka ay u baahan tahay joogitaanka hay'ad gooni-gooni ah ee Midowga Afrika si loo dhiso wadajirka qaaradda, u caddeeyo caqabadaha guud iyo xalinta caqabadaha si loo xaqiijiyo tartanka qaybtiisa heer qaarad."
Ciyaaraha, Dalxiiska. nabadduna weligeed waxay ahayd midnimo.
Madaxweyne Macky Sall ayaa ka mid ahaa dadkii todobaadkan ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha xulka kubbadda cagta Senegal kaddib markii uu markii ugu horreysay ku guuleystay Koobka Qaramada Afrika muddo 60 sano ah.
Madaxweynaha ka sokoow, tobanaan kun oo dadwayne ah oo aad u faraxsan ayaa u dabaal dagay dib ugu soo laabashada ciyaaryahanada Dakar, iyaga oo ku fadhiyay baabuurta dushooda, kuna cayaarayeen wadooyinka caasimadda.
Xataa caasimadda Faransiiska ee Paris, oo ay ku nool yihiin bulsho badan oo reer Senegal ah, kumannaan taageereyaal ah ayaa ku damaashaaday isu soo bax ka dhacay Arc de Triomphe.
Senegal laga adkaaday Masar 4-2 rigoorayaal ah ciyaartii koobka qaramada Afrika ee ay Algeria martigelisay Axadii finalka ka dib markii ay labada kooxood ku kala bixi waayeen in ka badan 120 daqiiqo oo kubbada cagta ah.
Xubinta Dalxiiska Adduunka ee Senegal Deme Mouhamed Faouzou, Dakar, oo sidoo kale ah lataliyaha Wasaaradda Dalxiiska iyo Gaadiidka Cirka ee Senegal, safiir ka tirsan Guddiga Dalxiiska Afrika, iyo qaabilaadda sharafta leh. Halyeyga Dalxiiska Adduunka Magacaabista Shabakadda Dalxiiska Adduunka ayaa ah mid aad u faraxsan.
Wuxuu u sheegay eTurboNews: “Qoys kasta oo reer Senegal ah, qof kasta oo jecel, waxa uu galiyay lacag, dadaal, waqti iyo dareen si ay Senegal ugu guulaysato koobkan. Waxay ku soo beegantay saacad go'an, laga bilaabo soo noolaynta dhaqaalaheenna, gaar ahaan dalxiiska, kaas oo si naxariis darro ah, iyo horeba, u saameeyay COVID 19."
"Guushaan, oo ka baxsan farxadda iyo damaashaadka, waa in dib loogu noqdaa ujeeddadeeda ugu weyn, taas oo weli ah oo weli ah horumarinta Senegal. Waxa loo baahan yahay in aanu tusno waxa aanu u socono oo aanu ka iibino caalamka”.
"Birta ku dhufo markay kululaato. Waxaa la joogaa waqtigii aan ku midoobi lahayn dardargelinta, anagoo adeegsanayna kartideena iyo aqoontayada sida aan kor ugu qaadno Senegal guud ahaan. "
"Anigoo ah Senegalese iyo Galbeedka Afrika ee ugu horreeya ee lagu abaalmariyo geesiga dalxiiska adduunka, waa inaan ku daraa saddexdan walxood si aan ugu ololeeyo dalxiiska iyada oo danta dadka iyo dhaqaalaheena."
Deme Mouhamed Faouzou wuxuu raaciyay: "Waxaan horumarin karnaa qorshe isgaarsiin iyo dalabyo xayaysiin ah oo loogu talagalay Senegal oo ah meel safar ah. Ciyaaryahan kasta oo kubbadda cagta ah waa in loo magacaabo danjiraha gobolkiisa, si kor loogu qaado dhaqamada gaarka ah ee dhulkeena.
Waa in la abaabulo safar, iyadoo ciyaartoydu ay u safraan dalka si ay u soo bandhigaan dalxiiska gudaha, si ay u abaal-gudeeyaan qof kasta oo Senegal ah, inuu gacan ka geystay guusha.
Ugu dambayntii, ciyaartoy kastaa waa inuu noqdaa safiir dalxiis iyo danjire u qaabilsan ciyaaraha Afrika si uu u horumariyo dalxiiska dawlad-goboleedyada iyo gobollada oo heer caalami ah oo Afrikaan ah”.
Isagoo ay taageerayaan Guddiga Dalxiiska Afrika iyo Shabakadda Dalxiiska Adduunka Mr. Deme ayaa hadalkiisa ku soo gebagebeeyey: “Tani waa qayb aan ka qaatay la-taliyaha dhinaca farsamada ee wasiirka dalxiiska.
Juergen Steinmetz, oo ah guddoomiyaha Shabakadda Dalxiiska Adduunka ayaa yiri: “Waxaan gebi ahaanba ku raacsannahay oo aan taageernay geesigayada dalxiiska Mr. Deme qiimeyntiisa muhiimadda ay leedahay hab mideysan oo dalxiiska Senegal iyo qaaradda Afrika. Waqtigan xaadirka ah, fursadda lagu sii wado qorshe la shaqeyn karo iyo Senegal oo ku taal kursi hoggaamiye waa mid aad u weyn. "
Africa Midowga Afrika Beeraha Algeria Business Covid Dowladda Ururka Senegal Dalxiiska Transport Qaramada Midoobay West Africa
Hudheelka Luxury ee Ugu Cusub ee Houston ayaa lagu bilaabay Xaflad Furitaan Cusub oo ay ka soo qayb galeen Houston Notables
COVID-19 gudaha Ameerika: aaway bini'aadantinimada?
Saint Lucia waxay soo afjartay tijaabada dadka socotada ah ee la tallaalay, kahor...
Duulimaadka cusub ee aan joogsiga lahayn ee u dhexeeya Belagavi iyo Nagpur ee Star...